QORMO:- Madaxweyne Farmaajow Xal keen, Xasarad Xilkaad ku Wayninee!! – Idil News
HELSINKI(IDIL NEWS)-Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, oo la hadlayay Jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Jubba ayaa Afla gaadeeyay Bulshada Soomaaliyeed iyo Dowladnimada haatan jirta ee lagu soo Bixiyay Juhdig, gaar ahaan wuxuu aad ugu gafay madaxda maamul gobaleedyada, xubnaha xildhibaanada ee mucaaradka ku ah iyo Madaxdii isaga xilka madaxweyne uga horaysay.
Isagoo si toosa Weerar afka ah ku Qaaday Madaxda Dowlad goboleedyada oo uu Tilmaamay inay Gabeen Shaqadoodii oo uu ku sheegay in deegaanada ay mas’uulka ka yihiin gaarsiiyaan adeegyada aas aasiga ee dadka u baahan yihiin, sida waxbarasho, caafimaad, ceelal biyo loo qado, canshuuraha uruuriyaan, taasoo xusay inay tahay nidaamka Federaalka ee Adduunka ka jiro.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Sidoo kale ku Eedeeyay Dadka Diidan Qaab Hoggaamintiisa Kuwo Qabyaalad ku Diidan oo Kasoo Hor-jeeda Hormarka Dowladiisu sameynayso, Isagoo Hadaladiisa laga dhan-dhansan In uu ku fashilmay balan qaadkii uu balanqaaday la dagaalanka kooxda alshabaab la dagaalanka shaqala’aanta haysata dhalin yarada iyo la dagaan lanka musuq maasuqa. Fashilkiisa siyaasadeed ayuu doonayaa in uu cidkale dusha u saaro.
Hadaba aniga oo Doonaya inaan Wax u Iftiimiyo Bulshada Soomaaliyeed, sida aad horeyba iigu barateen, Ayaan waxaan Qoraalkan kusoo Koobayaa Xaalka Dalku Marayo iyo Hab-dhaqanka Madaxweyne Farmaajo.
Xaqiiqada Taal iyo Xeyd xeydashada Madaxweyne Farmaajo!
Madaxweyne Farmaajo oo Hoggaaminaya Soomaaliya Muddo ku dhow Labo Sanno, waxaa uu Wajahaya Xaqiiqooyin badan oo Soomaaliyadii lasoo Kabayay dib ugu celinaya Jabniin,
taas oo Sabab ay u tahay iska indha tirka Waaqiciga hada Dalku Maraayo ee u baahan Maslaxada iyo Mada hada xasilinta Dadka Soomaaliyeed ee Soo maray Xaaladaha Colaada ee kalifay Is Aaminid la,aanta.
Waxaan uga gol lee yahay Madaxweyne Farmaajo maanta halkii laga doonayay inuu soo dhaweysto oo la gogal fariisto Madaxda Dowlad gobaleedyada ee Soomaaliya 3 Meelood 2.5 Xukuma, qaarkoodna Iyagu ka Awood iyo Maamul Baahsan yihiin Dowladda Federaalka,
ayuu wuxuu ku dhaqaaqayaa Tilaabawa tilaabada ay ka Xanafsan tahay ee kala Fogeynaysa Ummada Soomaaliyeed.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisulwasaare Kheyre waxaa ay ku lee yihiin Waxba Qabanay intii aan Hoggaaminaynay Dalka, Hadii Iyadoo Jilaal Lagu jiro Daran aad Dhahdid Gu’ Ayaan ku jirnaa oo Xoolihii la Bakhtinayay Biyaha iyo Baad la,aanta ee Gurmadka loo Daabulayay aad dhahdid Baruur yay la socon la yihiin, soo ma aha Waali aanan Qofna ka Qaadanayn, taasna waxaa lamid ah Hab-dhaqanka Madaxweyne Farmaajo iyo Xukuumadda uu Hoggaamiyo Ra’iisulwasaare Kheyre ee ah in Dalka uu Dhaqaalihiisu Bur-bursan yahay Sicir bararka iyo Colaadaha Sokeeye Buux dhaafiyeen, Al-Shabaab ay Dowladda ka Maamul Balaaran tahay, AMISOM ay Waardiyaha ka heyso ee Shisheeyuhu tooska u Maamulayo, ay ku lee yihiin Hanaanka Dowliga waa Xoogan yahay, Dhaqaaluhu waa Heer sare, Nabad ayaa Guri Walba ka jirta iyo Anagaa Heerka soo gaarsiinay.
Aniga oo Doonaya in aan soo Koobo Qoraalkeyga wax badana aan u Iftiimiyo Shacabka Soomaaliya, waxaan Awoodda Dowladda Federaalka iyo Dowlad Gobaleedyada ee Danaha Dalka kusoo Koobayaa Wax uu ka Qabo Dastuurku.
Qodobka 63aad Wada-xaajoodyada Caalamiga
1. Iyada oo la qaddarinayo nuxurka iskaashi ee lagu shaqeynayo, Xukuumadda Federalku waa in ay Dowlad Goboleedyadda kala tashataa wada-xaajoodyada la xiriira kaalmada dibedda, ganacsiga, cahdiyada ama arrimaha muhiimka ah ee la xiriira heshiisyada caalamiga.
2. Marka ay wada xaajoodyadu si gaar ahaan u saamaynayaan danaha khuseeya dawlad/dawlado xubno ka ah Dawladda Federaalka, Xukuumadda Federalku ergada wada-xaajoodka gelaysa waa in ay ku dartaa wakiillo ka socda dawladdaas ama dawladdahaas.
3. Xukuumadda Federaalku marka ay ka hawlgelayso wada-xaajoodyada, waa in ay isu aragtaa xil-gudashadeedana ka muuqataa in ay tahay ilaaliyaha danaha Dowlad Gobaleedyadda.
Waxaa hubaal ah Hadii Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisulwasaare Kheyre ay diyaar u yihiin in Xal laga gaaro Khilaafka Hada jira, in ay Fududaha Xalkiisa, waayo Khilaafku ma ah mid Iska yimid oo Meel loo raaco laheyn ee Waa mid Dastuuri ah oo uu qeexayo Xalkiisa Dastuurka KMG ah ee JF Soomaaliya.
Wadada Loo Marayo iyo Cida Garta Goynaysa:
Khilaafka Cida Dhex-dhexaadinaysa waa Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka JF Soomaaliya, sida uu Qabo Dastuurka KMG ah, balse Madaxweyne Farmaajo ayaa haatan Sababay in Xubnaha Beesha Caalamka iyo Dowladaha Dariska ah ay soo Fara-geliyaan Arrimaha Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisulwasaare Kheyre waxaa ay Hoos u dhugteen Golaha Aqalka sare oo ay Inkireen Doorkoodii, waxa ay Dhabar jabiyeen Dadaalkii ay Wadeen, Iyaga oo baal-maraya Dalabyada Goluhu u diray, taas waa sababta ay Shisheeyuhu u soo galeen Arrimaha Khilaafka.
Kooxda Villa Somalia fadhida waxay diideen xaqiiqda jirta hada sow nasiib xuma maaha in IGAD dib noogu soo rogaal celiso oo ay dawlada iyo maamulada hoos yimaada heshiisiiso.
Wakiilada Beesha Caalamka eek u sugan Soomaaliya iyo Madaxda Dalalka Gobalka Gees-ka Africa ayaa aad ugu walaacsan khilaafka ay abuureen kooxda villa somali. Xukunta ee siyaasada wanaagsen diiday oo colaad dooratay iyo khilaaf.
Maxay ahay khudbadii madaxweyne musaveni ?
Madaxweynaha Dowladda Uganda oo Khudbad ka Jeedinayay 31-October-2018, Munaasabadii lagu Dhameystirayay Heshiiska Dowladda iyo Mucaaradka Koonfurta Sudan ayaa Sheegay in Soomaaliya ay tahay Dal aysan ka jirin Dowlad ee Shisheeye gacanta ku hayo, Iyadoona halkaas uu Goob-joog ka ahaa Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo Miyuu tirayaa indhaha Caalamka wax hada ka jira Soomaaliya ee ku Saleysan Xaqiiqada,
Soomaalidu waxay ku Maah-maahdaa “Af-xumo Waxbay ka Fogeysaaye, Wax kuuma soo Dhaweyso” –Madaxweyne Farmaajo Hadii uu Is lee yahay Af-maquuni Xaqiiqada adoo Boor Been iyo Buunin ah ku rogaya oo oranaya ‘Qaab Qabiil iyo Wax qabadkeyga’ ayaa looga soo Horjeedaa.
Shacabkan xalinta khilaafka dhexyaala ayey kuu doorteen inaad oday u noqoto ee kuuma doonan inaad xasarad iyo colaad ku soo kordhiso adigoo ka amarkaadanaya nin aan la doonay oo sheegta inuu ku soo maalgashaday waa mudane fahad yasiin iyo kooxdiisa dawlada Qatar.
Hoggaamiye Walbaa Taariikh-da ayaa Qoraysa hadalkiisana Hoos kastaa waa Tagayaa,
waxaan Madaxweyne Farmaajo kula dar-daarmayaa inuu Labo tii u roon u yeelo ‘Hoggaaminta Soomaaliya waa uu Ku Fashilmeen Ha Is Casilo si Geesinimo iyo Sharaf leh aanse aheyn Dadaalkiisa ha saaro 2 Sano ee u hartay Balan-qaadkiisii ahaa Nabadoonimada iyo isku soo dhaweynta Shacabka Soomaaliyeed, ee haatan uu Goob walbaa uga shiday Dabka ee Bilihii ugu dambeeyay ay sababtay Dagaal Beeleedyada ay Dowladdu ku lug lee dahay inay ku barakacaan Dadka ka badan 15 Kun. oo kan Gobalka shabeelada hoose ka mid yahay.
W/D: Danjire Maxamed Caalim
Kala Xariir: Caalim68@hotmail.com